MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA IDAHA EE POLISH TATRA - EEYAHA
Qof weyn oo Tatra ah oo leh eey, sawir qadarin leh Naadiga Polish Tatra Sheepdog
Polish Tatra Adhi
pol-ish tat-rah idaha-dawg
Jaakada laba-geesoodka ah ayaa culus oo leh jaakad dusha sare ah oo ay adag tahay in la taabto, toosan ama wax yar ka lusha. Koodhka hoose waa mid cufan oo cufan. Midabka koofiyaddu waa caddaan saafi ah, oo aan lahayn astaamo midab leh. Noocani wuxuu leeyahay sanka midabkiisu madow yahay, bushimaha iyo geesaha daboolka. Suumanka cagaha ayaa mugdi ah. Noocani wuxuu u baahan yahay milkiile caqli badan, oo doorbidaya khibrad hore eey weyn. Mulkiiluhu waa inuu noqdaa hogaamiye alfa adag, cadaalad ah, kalgacal leh oo aad ula jaan qaada dhamaan sharciyada.
Adhiga Polish Tatra Sheepdog waxaa loo adeegsadaa dhaqashada, iyo ilaaliyaha adhiga iyo idaha. Sidoo kale waa loo haysan karaa wehel ahaan iyo ilaaliye ahaan. Eygan shaqeynta ee dabiiciga ah waa mid madax bannaan, is-fakaraya, aad u caqli badan oo awood u leh inuu qiimeeyo xaaladaha aan lahayn hagitaanka aadanaha. Si wanaagsan ula dhaqan iyaga inta ay weli da 'yar yihiin iyo inta ay nool yihiin oo dhan. Adeecida aasaasiga ah waa waajib. Daacad u ah oo jecel qoyskooda iyo asxaabtooda dhow laakiin badiyaa waxaa lagu hayaa meel aan la aqoon. Ilaaliyahaani wuxuu u egyahay inuu ahaado dhul ka mid ah guriga iyo hareerahooda sidaa darteed hogaaminta aadanaha ee joogtada ahi waa lama huraan. Waxay ku siin doonaan ciqaab weyn oo digniin ah wax kasta oo loo arko shaki ama la yaab leh waxayna qaniini doonaan aakhirka haddii laga hortago ama la riixo. Haddii banaanka looga baxo waxay soo jeedaan oo ay feejignaadaan inta lagu jiro saacadaha habeenkii, iyagoo roondo ku sameynaya guriga. Waxay ku qaylin doonaan wax kasta oo meesha ka baxsan ama aan caadi ahayn. Waxay jecel yihiin barafka iyo cimilada qabow, cimilada oo adkaysi badan. Iyagu maahan eey dagaal badan waxayna u muuqdaan inay la jaan qaadaan xayawaanka kale ee aan xayawaanka ahayn. Guud ahaan aad ufudud ula dhaqanka wanaagsan iyo akhlaaqda leh.
Dhererka: Dumarka 24 - 26 inji (60 - 65 cm) Ragga 26 - 28 inji (65 - 70 cm)
Miisaanka 80 - 130 rodol (36 - 59 kg)
Dhibaatooyinka hiddo-wadaha iyo caafimaadka: miskaha dysplasia marmar. Xaalado aad u yar oo la soo sheegey (in ka yar 1%) oo ku saabsan raaxaysiga astaamaha, indho fiiqista carruurta, suuxdinta, xasaasiyadda maqaarka iyo buro (xinjirowga caloosha).
Eeyadan laguma talin karo inay ku noolaadaan guri isla markaana waxay ku fiicnaan lahaayeen barxad weyn oo dhex-dhexaad ah. Waxay ubaahanyihiin boos, laakiin sifiican ayey ulaqabsadaan nolosha qoyska. Runtii ma ahan kuwo firfircoon gudaha, laakiin waxay u baahan yihiin jimicsi joogto ah dibadda. Xayndaabku waa lama huraan maadaama laga yaabo inay ku meeraystaan ​​iyagoo raadinaya xuduudaha waxay aaminsan yihiin inay tahay dhulkooda. Eydu waa firfircoon yihiin waxaana laga yaabaa inay u janjeeraan inay ka warwareegaan ama baxsadaan. Ka doorbida cimilada qabow.
Waxay u baahan yihiin in lagu qaado a socod maalinle ah . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in lagu sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaaminta, sida dareenku u sheego eeyga hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasna wuxuu ubaahan yahay inuu yahay aadanaha.
Qiyaastii 5-10 eyyo
Kaadhadhkeeda si xoog leh ayey u daadisaa dhammaadka gu'ga waana in la caddeeyaa lana hagaajiyaa. Sanadka intiisa kale waxay u ekaaneysaa si nadiif ah nadiif iyadoo ay ugu wacan tahay jaakada is-nadiifinta. Marar dhif ah ayey u baahan tahay qubays. Af-qalalan, noocani ma liqdo.
Noocani wuxuu ka soo jeedaa buuraha Tatra ee buuraha Carpathian ee koonfurta Poland.
Xerida, Ilaalada Adhiga
PKC = Naadiga Dabaqyada Booliiska
PTSCA = Polish Tatra Sheedog Naadiga Mareykanka
Goliath oo sudhan dhagaxyada, sawir qadarin leh Naadiga Polish Tatra Sheepdog
Martin the Polish Tatra Sheepdog (Owczarek Podhalanski) oo 3 jir ah— 'Martin wuxuu ka kooban yahay laymanka eyda wuxuuna ku dhashay beerta idaha caanaha ee Lemont Illinois oo loo yaqaan' Golden Whole '. Wuxuu la shaqeynayaa 4 kale oo Polish Tatras ah oo ku sugan dhul culus oo ku yaal koonfurta-galbeed ee metroo Chicagoland. '
Nadiif ah Polish Tatra Sheepdog.
sawirada godadka madow iyo kuwa cad
nooca yar ee retriever dahabka
ceel iyo shar pei mix
eeyaha lugaha lugta dambe ee lugta leh
yorkie Pit silky muqisho isku darka
isku darka corgi iyo basset